ဦးဦးကြီးမိုက်အတွက် မွေးနေ့ဆုမွန် | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Arts & Humanities » ဦးဦးကြီးမိုက်အတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်	45
Posted by ကြောင်ဝတုတ် on Jul 29, 2012 in Arts & Humanities, Cultures | 45 comments
လက်တို့သူက လက်တို့တာတောင် တကယ်လှုပ်မရတဲ့အနေအထားမို့
လေးမိုက်ခ်ရဲ့ စိန်ရတုသုံးပုံနှစ်ပုံအလွန်နှစ်နှစ်မွေးနေ့မှသည် နှစ်ပေါင်းသိန်းသောင်းမက
တွယ်တာသောမိသားစု၊ ချစ်ခင်သောသူငယ်ချင်းများနှင့် နှစ်သက်သော စကာ့တလန်စမ်းရည်လေး အားမှီဝဲရင်း စော်ကြည်သောဘဝ၊ ထီပေါက်သောချမ်းသာ၊ နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်သော လောကုတ္တရာ အကျိုးများ သယ်ပိုးနိုင်သောသူဖြစ်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်
ကြောင်ဝတုတ် has written 85 post in this blog.
ဒါပေမယ့် လောကမှာ ကိုယ့်ချစ်သူချည်းမဟုတ်လို့...
နေ၀န်းနီ says: ကိုကြီးရေ့….။ နောက်ကျသွားတယ်ဗျာ…။ ကျွန်တော့်ထက် ကိုးနှစ်တောင်ကြီးတာ ဆိုတော့ ကိုကြီးပေါ့…။ ဟက်ပီး ဘတ်ဒေး နော်…။
ဖိုးထောင် says: ဦးဦးကြီးမိုက် ရေ မွေးနေ့မင်္ဂလာပါ အသက် ၁၂၀ ဒိထက်အဆ ၁၂၀ ပိုပြီးမိုက်နိုင်ပါစေ ညွှတ်ညွှတ်ညွှတ်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8234
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မနေ့ညက 11နာရီ တောင်ကြီးကပြန်ေ၇ာက်။
ဒီနေ့မနက် အခုဖွင့်ကြည့်တော့ ကိုမိုက်မွေးနေ့။.
နှစ်ပေါင်းများစွာ အသက်ရှည် အဆင်ပြေသောသတင်းများကြားချင်ပါ၏.
Comments By Postရပ်ကွက်မှသည် နိုင်ငံဆီသို. - kai - garudaသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - kai - အလင်း ဆက်အယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ( မေ ၂၀၁၃) - kai - kaiအိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - ရဲစည် - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးသန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - Silver Twigအဟံ ပထမံ - nature - padonmarကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့သော ကျတ်တို့ဌာနီ - အလင်း ဆက် -etoneမြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - အလင်း ဆက် - ko pauk mandalay``ရွာထဲမှာ ဆုံကြတာပေါ့´´ - padonmar - မောင် ပေရွာသူ/သားများ အတွက် - အလင်း ဆက် - မောင် ပေ၄ လရှည်ကြာ ရွာထဲမှာ - Ko chogyi - Mr. MarGaအတု - မောင် ပေ - အလင်း ဆက်ဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့..... - မောင် ပေ - အရီးခင်လတ်သဂျီးနောက်ကနေ ဘယ်သူထိုး who? - အရီးခင်လတ် - Mr. MarGaလူစွန့်စားမြင့်ကျော်နှင့် ခေါင်းပြတ်နတ်ရုပ်တု (စ/ဆုံး) - မောင် ပေ - Mr. MarGaComment မှာ လူစည်ချင်ရင် (ယတြာ) - အလင်း ဆက် - သူကလေးသူတို့ ရောက်လာကြတော့မည်၊ သတိသာ ထား - naywoon ni - kyeemiteနားစွန် နားဖျား ရပ်ကွက်...။ - mee lay - Mr. MarGaရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း - Mr. MarGa - kyeemiteအထူးတလည် ကျေးဇူး တင်ရှိခြင်း - Mr. MarGa - Mr. MarGaအမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - kai - ဦးဦးပါလေရာမန္တလေးမြို့ကအစားအသောက်တွေ - KZ - kaiအတိတ်က ခြေရာတွေပြန်ကြည့်ရအောင် - အရီးခင်လတ် - ဦးကြောင်ကြီးသို့ ချစ်သောဖေဖေ - အရီးခင်လတ် - Myo ThantEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77895 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70551 Kyats )naywoonni (67417 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66832 Kyats )cobra (62183 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (59081 Kyats )MaMa (57881 Kyats )Top Posts & Pagesသင်ဇာဝင့်ကျော် နဲ့ မဟူရာ အလှ...